के कोरोना भाइरसबाट महिलालाई भन्दा अधिक जोखिम पुरुषलाई छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के कोरोना भाइरसबाट महिलालाई भन्दा अधिक जोखिम पुरुषलाई छ ?
चैत १४ गते, २०७६ - १४:४५
काठमाडौं । ग्लोबल हेल्थको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा, कोरोना भाइरसबाट पुरुषको मृत्युदर महिलाको तुलनामा अधिक छ । इटलीको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानको तथ्यांकअनुसार पनि त्यहाँ ६० प्रतिशत पुरुषहरु कोरोनाबाट पीडित छन् ।
चीन र दक्षिण कोरियाको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा पनि स्थिति त्यस्तै देखिएको छ । अमेरिकाले भने कोरोनाबाट को कति प्रभावित भए भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन् । तथ्यांकअनुसार इटलीको एउटा केन्द्रमा कोरोनाबाट मर्ने ३४ जनालाई हेर्दा जहाँ १० जना मात्रै महिला थिए भने २४ जना पुरुष थिए ।
जीवनशैली मुख्य कारण
पुरुषको मृत्युदर बढि हुनाको कारणबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन त भएको छैन् तथापि महिलाहरुको तुलनामा जोखिमपूर्णं काममा पुरुषहरुको बढि सहभागिता हुनुलाई कारण मानिएको छ । अधिकांश पुरुषहरुले धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने गर्दछन् । अहिलेसम्मको अध्ययनले धुम्रपान र मध्यपान गर्ने व्यक्तिमा कोरोनाको जोखिम अत्याधिक हुने गरेको पाइएको छ । कारण उनिहरुको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता (इम्यूनिटी पावर) अति नै कमजोर हुन्छ ।
चीनमा गरिएको एक सर्भेमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि पुरुषहरु धुम्रपान गरेको पाईएको थियो । जहाँ ३ प्रतिशत मात्रै महिलाले धुम्रपान गरेको कुरा भेटिएको थियो । इटलीमा ७० लाख पुरुषहरु धुम्रपान गर्ने र ४५ लाख महिलाहरु धुम्रपान गर्ने गरेको तथ्यांक यसअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
एक रिपोर्टअनुसार इटलीमा कोरोनाको भाइरसबाट मर्ने अधिकांश व्यक्ति कुनै कुनै रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार कोरोनाबाट मर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत मानिस उच्च रक्तचापका बिरामी थिए । साथै उच्च रक्ततापका अधिकांश बिरामी पुरुषहरु नै थिए । एजेन्सीबाट
चैत १४ गते, २०७६ - १४:४५ मा प्रकाशित